Kporie nri kacha mma na Hong Kong | Njem zuru oke
Nri dị iche na Hong Kong
Mayfọdụ nwere ike ikwenye na na Hong Kong, ebe ọ bụ mpaghara ndị England na-achị ruo 1998, a na-asụ Bekee, mana ọ bụghị. Chọta ndị na-asụ bekee siri ike karịa ka ị chere, nke nwere ike ịbụ nsogbu ma ọ bụrụ na ị gaa ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ma chọọ ịtụ efere.
Hong Kong, ama ama maka nri ya, na-eje ozi site na anụ oke na n'okporo ámá, yana mkpụrụ osisi na akwụkwọ nri ndị a na-amaghị n'ọtụtụ mba Europe na ọtụtụ ụlọ nri.
Na Lọ oriri na ọrantsụtaụ na-enye ọtụtụ efere mara mma nke ukwuu yana ndị ọzọ anaghị atọ ụtọ n'anya. Enwere efere nke yiri ka a ikpuru ofe nke ka dị ndụ mgbe ha rutere na tebụl gị, ya mere ịnwale ha bụ nnukwu nsogbu.
Duck na-ejekarị ozi. Nwere nku na isi na ụkwụ ya na efere ojii na-egbu maramara, nke na-eme ka a nwee mmetụta na ọ bụ nke nta. A na-ejikwa isi anụ ọkụkọ na-aga ije ma ọ dị ka ụbụrụ nke anụmanụ ọ bụ ihe na-atọ ụtọ n'ihi na ọ bụ omenala ịmị ha ruo mgbe ọ nweghị ihe fọdụụrụ.
Achịcha ahịhịa bụ nnukwu, Dị ka nri nke chi, achicha achicha a ma ama, nke dị ka uto nke eluigwe na ọkachamara bụ lobster.
O doro anya na ị ga-ebi ndụ pụrụ iche ma na-akpali akpali Ahụmahụ na-eri nri n'oge ị nọ na Hong Kong, ebe ị na-agaghị echefu nri ifo nke mba dị na njedebe nke ụwa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Nri dị iche na Hong Kong
7 okike ebube nke ị na-agaghị echefu na Canada